Mandra-pitrangan’izay hitranga… | NewsMada
Andrasana amin’ny faran’ity herinandro ity ny voka-pifidianana vonjimaika havoakan’ny Ceni. Na tsy hivoaka aza ny anaran’ireo kandidà 151 voafidy ho solombavambahoaka, azo fantarina izay ho eny amin’ny Antenimierampirenena. Na tamin’ny namoahan’ny Ceni ny fironana amin’ny voka-pifidianana aza, efa azo tombanana izany.
Mandra-pitrangan’izay hitranga, miseholany ny fanoherana ny voka-pifidianana etsy sy eroa. Efa nisy aza ny hetsi-panoherana ny fifidianana, niafara tamin’ny korontana na mbola ahina hivadika zavatra hafa. Hanao ahoana? Na ahoana na ahoana, tsy atao mahataitra fa tsy zava-baovao? Tsy tokony hikorontanana na hanakorontana an-toerana aza.
Be loatra ny endri-javatra sampontsampona amin’izao fifidianana solombavambahoaka izao, fa tsy amin’izao fiandrasana voka-pifidianana izao ihany, fa efa hatrany am-piandohan’ny raharaha. Anisan’izany, ohatra, ny fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana, nifandrirarirana tamin’ny hoe tsy misy lalàna fa fampitandremana no azo atao.
Nony tena fampielezan-kevitra, tsy nisy izay fampiharan-dalàna sy fanasaziana, na teo aza ny fampitandremana. Nahabe resaka koa ny hoe be lavitra no ho ny kandidà natolotry ny antoko na vondrona politika ny tsy miankina. Misy amin’ireo kandidà manana raharaha any amin’ny fitsarana. Ao aza ny any am-ponja nefa ho voafidy…
Tsy fahita firy amin’ny fifidianana hoe manara-penitra avokoa ireny. Fahasamponana hatrany am-piterahana? Na hafahafa fa toa vitavita sy tsy hitahita ho azy amin’izao… Nefa nizotra ihany ny fifidianana. Mandra-pitrangan’izay hitranga, inona koa ny zava-tsampontsampona mety hitranga amin’izao fiandrasana voka-pifidianana izao?
Amin’izany, ho to teny ihany ny Ceni sy ny HCC? eny, na eo aza ireny karazana fahasamponana rehetra ireny. Na izany na tsy izany, ny amisavisana ny ratsy hiavian’ny soa: mila maka lesona amin’ny lesoka. Mila jerena dieny izao ny hoavy, fa any no mety ho valiny. Hanao ahoana ny Antenimierampirenena vaovao hijoro sy hiasa eo?